Care Khabar रिसाएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डलाई सोधिन्ः माधव नेपालसँग पार्टी एकता गर्न लागेको हो? - carekhabar.com
रिसाएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डलाई सोधिन्ः माधव नेपालसँग पार्टी एकता गर्न लागेको हो?
३१ असार २०७८, बिहीबार ०९:०७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ। पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थका लागि आफ्नो पदको समेत कुनै ख्याल नराखी निर्णय गर्नु भण्डारीका लागि सामान्य बन्दै आएको छ।
उनीहरुले नियुक्तिको भाषाप्रति असहमति जनाउँदै सच्याउन आग्रह गरे। स्रोतका अनुसार नेताहरुले सच्याउन भनेपछि भण्डारीले आफूले नभई कर्मचारीले लेखेको भन्दै पन्छिन खोजिन्। भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो लेखिन पुगेछ। कर्मचारी साथीहरुले के के गरे….।’
आफैले स्वीकृति दिएको भाषामा कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोजेपछि प्रचण्डले अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै ‘गलत कुरा लेखिन नहुने र त्यसलाई तत्काल सच्याएर शपथ ग्रहण हुनुपर्छ’ भन्ने अडान राखे।
नेताहरु र भण्डारीबीच केही बेरको सवाल जवाफपछि सर्वोच्चको आदेश र संविधानको धारासमेत उल्लेख हुने गरी नियुक्तिको भाषा मिलाउने सहमति भयो। त्यस्तै अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पढेर शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुरे गरे। कार्यक्रममा पढिएअनुसार अझै पनि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति वेबसाइटमा सच्याएको छैन।
समारोहमा सहभागी एक व्यक्तिले भने, ‘राष्ट्रपति ज्यूको मुड अफ थियो। उहाँले बसेरै शपथ ग्रहण गराउन माइक मिलाउने कर्मचारीलाई इसारा गर्नुभएको थियो। तर उसले कुरा बुझेन वा के भयो माइक माथि नै राखिदियो। त्यसपछि उहाँले शपथ गराउनुभयो। बधाई समेत नभनी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो।’